China 8 in 1 Type- C HUB, HDMI, USB3.0, Type- C PD 100w, SD&TF, RJ45, VGA mpanamboatra sy mpamatsy |Wellink
8 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD&TF, RJ45, VGA
8ao amin'ny 1 Type-C HUB,HDMI, USB3.0, Type-C PD100w,SD / TF karatra slot (manohana mamaky miaraka), RJ45 (Tohanana 1000MB tariby tambajotra), VGA (1080P)
HDMI 4K@30Hz，USB 3.0*2, Type-C PD 100w Enter, SD/TF card slot (manohana famakiana simultaneous), RJ45 (Tohanana tambajotra tariby 1000MB), VGA (1080P)
• 8-in-1 USB C Hub: Ny USB c multiport adapter dia mahafeno ny fiasa rehetra ilainao.Miaraka amin'ny seranana USB 3.0 hafainganan'ny Sakafo, USB 2. 0x2, 4K@30Hz HDMI, seranana Audio 3.5mm, SD/TF Card Adapter, ary 60W USB C PD famandrihana haingana.
• USB-C amin'ny HDMI Adapter: Ny seranan-tsambo HDMI dia manohana 4K @ 30Hz output, izay afaka mamindra 4K @ 30Hz na avo-famaritana 1080P horonan-tsary amin'ny HDTV, ankafizo ny traikefa amin'ny horonan-tsary avo lenta (Azafady mba ho azo antoka fa manana endri-javatra feno ny fitaovana PC-nao. /Thunderbolt 3 USB-C port)
• Famandrihana haingam-pandeha: Ny USB-C.
• Portable & overheat fiarovana: 11.8 * 1.12 * 0.6 santimetatra, 1.9oz mini habe, FPC flexible tariby famolavolana, mora entina, miasa sy sariaka.Ampiasao ny teknolojia CNC firaka aluminium mba hisorohana ny hafanana be loatra sy hiarovana ny fitaovanao.
Fanamarihana alohan'ny hividianana:
1. Fanapahan-kevitra 4K: Ny fanapahan-kevitra farany amin'ny famoahana HDMI dia miankina amin'ny fitaovana mpampiantrano.(Raha tsy manohana ny famaha 4K ny fitaovanao dia ho 4K ny vokatra azo).
2. Famindrana angon-drakitra: Ny hafainganam-pandehan'ny famindrana angona dia miankina amin'ny hafainganan'ny karatra fitadidiana sy ny seranan-tsambo USB amin'ny solosaina.
3. PD Charging: Raha mila manefa ny solosaina ianao, dia tsara kokoa ny mampiasa ny charger tany am-boalohany mba hifandraisana mivantana amin'ny solosaina ho an'ny fiampangana, satria hanome ny hafainganam-pandeha haingana indrindra.Na mampiasa adaptatera fiampangana mihoatra ny 60W.
4. Azafady, ataovy azo antoka fa port USB C na port Thunderbolt 3 ny solosainao.Amin'ny ankamaroan'ny tranga, raha misy marika DP na Thunderbolt dia midika izany fa ny fiasan'ny HDMI an'ny solosainao dia mifanaraka amin'ny USB C hub.
5. Rehefa mandeha ny USB c hub dia ho mafana, matetika eo anelanelan'ny 45 sy 55 degre Celsius.Ara-dalàna izany toe-javatra izany, koa aza manahy.Azonao atao ny mametraka ny usb c hub izay mety amin'ny fanaparitahana hafanana.
Jereo ny fitaovanao:
1. Tablety/laptop misy fampiasa feno / Thunderbolt 3 USB- C port.
2. Mba hiantohana ny fiampangana PD dia mila manohana ny protocole Power Delivery ny tablette/laptop-nao.
(Mila fanampiana? Raha sendra olana ianao amin'ny fampiasana ny usb c hub hifandraisana amin'ny solosainao dia miangavy anao hijery anay, faly izahay hanampy anao hanamarina raha azo ampiasaina amin'ny fitaovanao ny usb c hub.).
Fanontaniana:Nahoana aho no tsy afaka mampiakatra ny feo avy amin'ny fahitalavitra?Tsy maintsy mihaino amin'ny alalan'ny solosaina finday aho fa ambany dia ambany?
Valiny:Azonao atao ny manitsy ny haavon'ny fahitalavitra amin'ny alàlan'ny firafitry ny rafitra.Torolàlana momba ny fampandehanana: Mandehana any amin'ny firafitry ny rafitra, feo, vokatra, ary mifidiana TV avy amin'ny menio midina.
Fanontaniana:Azoko ampiasaina amin'ny desktop iMac ve ity sa ho an'ny portable ihany?
Valiny:Ny USB CC hub dia miasa miaraka amin'ireo fitaovana misy USB-C feno vokatra / Thunderbolt 3 USB-C port.
Fanontaniana:Afaka miasa amin'ny Samsung galaxy tab s6 ve izany?
Valiny:Tsia, tsy afaka miasa amin'ny Samsung galaxy tab s6.
Fanontaniana:Mifanaraka amin'ny iPad Air 4.
Valiny:muy buen producto, totalmente compatible con imac, se queda encendida la luz de activación de la micro sd cuando se utiliza, fa ny vokatra dia misy vokatra acorde a las expectativas.Lo recomiendo totalmente.
Fitaovana tsy mifanentana:
Nintendo Switch, USB SuperDrive, Original XPS 13 stock adapter
Fitaovana tsy mahazaka USB-C Media Display
VivoBook L203MA Ultra-Thin, VivoBook 15 Manify sy Maivana Laptop
100e Chromebook faha-2 Gen
2-in-1 11.6" convertible Chromebook Touchscreen Laptop (2020)
Solosaina ecran 15.6″ HD, écran écran 15″ FHD, solosaina finday 14″ ho an'ny trano sy fandraharahana
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Mac OS X 10.6 na aoriana, Linux 2.6.14 na aoriana, iPad OS
teo aloha: 7 in 1 Type-C HUB, HDMI, USB3.0, Type-C PD 100w, SD & TF, Audio 3.5mm
Manaraka: 9 in 1 Type-C HUB, USB3.0, Type-C PD 100w, VGA(1080P), 3.5mm Audio ho an'ny mac air